‘असाध्यै हट’ भएका कारण यि टिभी स्टार सपिङ मलबाट निकालिइन्, त्यसपछि के गरिन् ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/‘असाध्यै हट’ भएका कारण यि टिभी स्टार सपिङ मलबाट निकालिइन्, त्यसपछि के गरिन् ?
‘असाध्यै हट’ भएका कारण यि टिभी स्टार सपिङ मलबाट निकालिइन्, त्यसपछि के गरिन् ?
एजेन्सी । एक जना युवतीलाई असाध्य हट भएका कारण सपिङ मलबाट निकालिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । ति युवतीले आफै त्यस्तो खुलासा गरेकी हुन् । एक रियालिटी टिभी स्टारले आफू ‘असाध्यै हट’ भएका कारण दुबईको एक सपिङ मलबाट आफुलाई बाहिर निकालिएको दाबी गरेकी छिन् ।
आफै बाहिर जान नमानेपछि उनलाई प्रहरी बोलाएर निकाल्छौं भनेर चेतावनी पनि दिइयो । उनको यो भनाई अहिले निकै चर्चित भएको छ । अन्तराष्ट्रिय मिडियाले उनको चर्चा गरेका छन् । उनले अन्तरवार्ताका क्रममा भनेकी छन्, केही समय अघि म छुट्टी मनाउन दुवई गएकी थिएँ । २२ वर्षकी एमी रस सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर हुन् । इन्स्टाग्राममा उनका १८८,००० फलोअर्स छन् ।
उनले भनिन्, ‘एकपटक उनी दुबईको सपिङ मलमा जाँदा मेरो सामना सुरक्षा कर्मचारीसँग भयो । उनले मेरो लवाई सही नभएको बताएका थिए ।’ यस्तै जर्मन मिडिया अनुसार यो घटना त्यतिबेला भयो जब रियालिटी स्टार ग्लिटर टप र मिनी स्कर्ट लगाएर मल गएकी थिइन् ।
एमी रसले दाबी गर्दै भनिन्, ‘मलमा प्रवेश गरेपछि सुरक्षाकर्मीले मलाई म यसरी घुम्न नसक्ने बताए । त्यसपछि कर्मचारीले मलाई सपिङ गर्न दिएनन् । उनीहरुले मलाई प्रहरी बोलाउने ध म्की पनि दिए । यहाँसम्म कि उनीहरुले एक लिखित चेतावनी पनि दिए ।’
एमीले बिल्ड वेबसाइटलाई भनिन्, ‘एक सुरक्षा कर्मचारी अचानक म भएठाउँ आए र मैले असाध्यै उ त्ते जि त गर्ने पहिरन लगाएको छु भन्न थाले । म यसरी मलमा घुम्न नसक्ने पनि उनले बताए । उनीहरुले मलाई प्रहरीको ध म्की दिए र मलाई मलबाट बाहिर निकालिदिए । उनीहरुले लिखित चेतावनी पनि दिए ।’
युवतीले पाएको लिखित चेतावनी दुबई मलको एक शिष्टाचार नीति थियो जसमा लेखिएको थियो, ‘कृपया सम्मानजनक कपडा लगाउनुहोस् ।’ एमी रसले थपिन्, ‘त्यसपछि मैले बाहिर राखिएको एउटा लामो टिसर्ट खरिद गरेँ । यद्यपि, मलाई लाग्दैनथ्यो कि मेरो लवाई त्यस्तो का मु क थियो ।’
डिभोर्स भैसकेकी पूर्व पत्नीलाई ब,’लात्कार गरेको आरोपमा भोजराज थापा पक्राउ
सुजिताले अन्तिम पटक दिदिलाई फोन गरेर भनेकी थिइन-‘मलाई आँखामा पट्टी बाँधेर गाडीमा राखेका छन……’ त्यसपछि..
प्रधानमन्त्रीलाई कालीप्रसादको खुलापत्र– वेद, पुराण र कानुनभन्दा माथि मनपर्ने नेताको गफ लाग्ने रहेछ
दाई बैदेशिक रोजगारीमा, भाइले आफ्नै भाउजुलाई यस्तो के गरे?
श्रीमान विदेशमा छन् ७ वर्षको छोरा र सासुसंग बसेकी मनकलालाई आफ्नै जेठाजु र उनका २ छोराले..?